Sangano Idzva Rinoumbwa Kuitira Kubatsira Vari Kushupika muSouth Africa
Chivabvu 13, 2020
Zimbabwe Immigrant Attacks
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakaumba sangano idzva rakanangana nekubatsira vanhu vanobva kuZimbabwe vari kuvhiringwa nedambudziko reCovid-19, muSouth Africa asi pasina rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende yaVaCyril Ramaphosa.
Sangano reZimbabwe United for Progress, iro rakaumbwa mwedzi wapera, rinoti rakaumbwa mushure mekunge hurumende yeSouth Africa yaumba homwe yemari inobatsira zvizvarwa zveSouth Africa chete zviri kuvhiringwa neCovid-19.
Sachigaro wesangano iri, Amai Martha Chasi, vanoti sangano ravo rine vanhu vakasiyana siyana vakaunganidzwakuti vayamure zvizvarwa zveZimbabwe, nekuzvitsvagira mari, chekudya, pekugara nezvimwe zvinokosha muhupenyu.
Amai Chasi vanoti basa guru rekutanga ndere kuyamuri mhuri yeZimbabwe yose iri muSouth Africa, iyo yakatarisana nematambudziko ari kukonzerwa nechirwere cheCovid-19.
Sachigaro wesangano revemabhizimisi ekuZimbabwe achiri kusimukira, VaStan Makwara, vari kukumbira mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa, kuti ibatsire nepose painogona napo kupa sangano ravo chikafu, mari kana rubatsiro rwavanokwanisa kuitira kuti sangano iri rikwanise kubatsira vari kutambura munyika iyi.
VaMakwara vanoti vose vanogona kubatsira nemari, vanokwanisa kuisa rubatsiro rwavo, mubhanga resangano iri, reFirst National Bank.
Mutauriri weZanuPF mudunhu reSouth Africa, uye vachiona nezvekufambiswa kwemashoko muZimbabwe United for Progress, VaKennedy Mandaza, varumbidza kubatana kwemhuri yeZimbabwe, kunyanya mapato ezvematongerwo enyika.
Imwe nhengo yesangano iri, uye vari munyori weMDC mudunhu reSouth Africa, VaNhamo Chikowore, vanoti vakaona zvakakosha kuti vaise zvematongerwe enyika parutivi, kuitira kuti vabatsire mhuri yeZimbabwe panguva yakaona iyi.
South Africa yave nevanhu vanosvika mazana maviri nevatanhatu vafa nekuda kwechirwere cheCovid-19, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru gumi nechimwe chete nemazana matatu nemakumi mashanu, kana kuti 11, 350.